Ihlabathi ➡ Discover Discover Online ▷ ➡️
Ukwimeko yobabalo olungapheliyo apho konke kulungile.
Intsingiselo yekhadi «Ihlabathi»
La Itshathi yeHlabathi ikhomba kubulumko bukamongameli obugcina ubomi koku nakwihlabathi liphela. Kwiindawo ezininzi zeTarot, ngumfazi eye yaba ngumfanekiso wethu oqhelekileyo wehlabathi. Uvela kwi Isiko lesiHebhere, i-Gnostic kunye nesiko lealchemical, kwaye iyafunyanwa phakathi kwezulu nomhlaba njengomama wemiphefumlo wendalo, umfazi kaThixo, kunye nomkhuseli wethu wemikhosi ye-karmic esiyikhuphileyo eMhlabeni kukungakhuli nokungazi kwethu.
Ileta yesithixokazi seHlabathi isimema ukuba sibe ngabemi base cosmic -Sakuba siqondile amandla omphefumlo wethu. Yazisa ngokuvuka komphefumlo ongafiyo, owenziwa ngaphandle kwesidingo sokufa.
Le leta, njenge Ilanga, idume ngokuba ayinantsingiselo ingalunganga akunamsebenzi nokuba ubonakala phi okanye njani. Ukuba i-hermetic axiom ngu "Zazi ngokwakho," lo mfanekiso umele into eyaziwayo xa ubume bokwenyani bomntu bulandelwa kwinkululeko yoyilo kunye nokuzalisekiswa kokugqibela.
Zola ngokwazi ukuba uyaphumelela kwinjongo yakho.
Kungenzeka ukuba ileta El Mundo te unika imvume yokwenza le nto uyifunayo. Okwangoku, inkuthazo yakho isondele kwintando kaThixo. Nokuba wenze impazamo, iya kuba yinto elungileyo ngakumbi. Hlala usebenza kwaye uqhubeke phambili.
Akukho sidingo sokuqhubeka ujonga okanye uphazamisa ukuzimela kwakho kunye nokubala. Endaweni yokufuna ukuvumelana okanye ukuqinisekiswa kwabanye, vele udanise umdaniso. Ngamanye amagama, zivakalise, usabele ngokwendalo, kwaye ziyeke iichips ziwe apho zinokuthi ziye khona.
Into ebalulekileyo yinjongo kaThixo. Nokuba umntu uyayivuma okanye akayamkeli akubalulekanga kangako. Nangona kunjalo, ukuba uvumela i-ego yakho ukuba inyuse, awuseloncedo kwisicwangciso esikhulu.